Matias Wired Keyboard, waa kumbuyuutar balaaran oo loogu talagalay kuwa aan rabin dhibaatooyinka | Waxaan ka socdaa mac
Kiiboodhka Matias Wired, oo ah kumbuyuutar ballaadhan oo loogu talagalay kuwa aan rabin dhibaatooyinka
Luis Padilla | | Gargaarka
Haddii aad raadineysid kumbuyuutar kumbuyuutar si buuxda u shaqeynaya oo leh Mac-gaaga, ha aadin dukaanka Apple maxaa yeelay muddo dheer ayaa laga tegey iyada oo loo rogay teebabka wireless-ka. Teebabka Bluetooth waa raaxo leh oo leh wanaag badan, laakiin waxaa jira isticmaaleyaal badan oo doorbida kalsoonida kumbuyuutarka caadiga ah ee leh fiilada USB-ga, waana sababtaas sababta uu Matias u daah furay "Keyboard Aluminiumkiisa Wired".
Iyada oo la adeegsanayo naqshad iyo qalab si ficil ahaan uga wada siman kiiboodhka la dheereeyey ee ay Apple soo bandhigtay illaa aan ka sii fogayn waa bedel fiican oo loogu talagalay kuwa doonaya inay iloobaan dib u soo kabashada kombiyuutarkooda kumbuyuutarka. Waxaan isku daynay waana kuu sheegeynaa waxyaabaha aan dareensan nahay.
1 Gaar ahaan loogu talagalay Mac
2 Faa'iidooyinka fiilada USB
Gaar ahaan loogu talagalay Mac
Waa kumbuyuutar loo sameeyay in lagu isticmaalo Mac, markaa ma waayi doontid mid ka mid ah furayaasha aan sida caadiga ah ugu adeegsanno nidaamka hawlgalka Apple. Xakamaynta iftiinka, xakamaynta mugga, Maareynta Howlgalka, cmd ... Kiiboodhka loo yaqaan 'Matias keyboard' uma baahnid inaad furayaasha furayaasha iska dhaaftid Si wax walboo ay sifiican u shaqeeyaan, waxaa laga soo saarayaa sanduuqa waxaana lagu xirayaa kombiyuutarkaaga. Kiiboodhka nambarada ayaa sidoo kale aad u faa'iido badan.
Kaliya maahan furayaasha laakiin naqshadeynta iyo qalabka kumbuyuutarka oo dhan laftiisu waa isku mid Apple. Aluminium Anodized ah iyo taabasho aad ugu eg kumbuyuutarka asalka ah ee shirkaddu iibisay illaa dhawaa. Bilooyin kadib adoo adeegsanaya kiiboodhka gadaal gadaal gadaashiisa oo isla isla iibiya iyo in aan sidoo kale ku lafagurno maqaalkan Waxaan dhihi karaa inay runtii tahay mid raaxo leh in wax lagu qoro.
Faa'iidooyinka fiilada USB
In kasta oo aan aaminsanahay tiknoolajiyadda bilaa-waayirka ah, haddana waa inaan qiraa inaan haysto kumbuyuutar leh fiilada USB-ga ay tahay mid raaxo leh, iyo kiiboodhka Matias oo leh sababo intaas ka sii badan. Ka sokow faa'iidada muuqata ee kuma xirna in dib loo buuxiyo kumbuyuutarka, halkan waa inaan ku darnaa mid kale oo aad u muhiim ah: oo leh laba dekedood oo USB ah oo kuu oggolaanaya inaad si raaxo leh ugu xirto qalabka.
Helitaanka marinnada dambe ee iMac-kaaga ma aha hawsha ugu raaxada badan adduunka, iyo kumbuyuutarkan laga adkaaday mahadsanid laba dekedood oo USB ah oo ku yaal geesaha dhinacyadeeda. Iyagu maahan 3.0 dekedo xawaare ku socda, sidaa darteed looguma talagalin wareejinta feylasha waaweyn, laakiin loogu talagalay xiriirrada xusuusta dibadda mararka qaarkood.
In kasta oo xaqiiqda ay tahay in isbeddelku u muuqdo mid si lama filaan ah loogu aadayo dhinacyada durugsan ee isku xirka wireless, teebabka xargaha leh ayaa sii wadaya inay yeeshaan dhagaystayaal ku qanacsan inay iyagu yihiin xulashada ugu fiican ee loo adeegsan karo miisaska, isku xirka xusuusta kaydinta. Matias Wired Keyboard wuxuu la kulmayaa dhamaan qodobbadan sidoo kale wuxuu leeyahay naqshad la mid ah kii hore ee USB ee laga xayuubiyay Apple. Iyadoo qiimo dhan € 69,99 en Mishiinada waa ikhtiyaarka ugu fiican kuwa doonaya kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee Mac.
Matias Kiiboodhka Xarkaha
Qaab-dhismeedka furaha ee Isbaanishka
Furayaasha kumbuyuutarka ee loo qaabeeyey macOS
Laba dekedood oo USB ah oo isku xira xusuusta dibedda
Ma ahan gadaal gadaal
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Kiiboodhka Matias Wired, oo ah kumbuyuutar ballaadhan oo loogu talagalay kuwa aan rabin dhibaatooyinka
Unsplash Waraaqaha, beddelaya wallpaper ee Mac
Plex DVR waxay kor u qaadaysaa wax soo saarka Apple TV illaa heerka nth